Accounting / Finance in Accounting and Auditing Services in Yangon
Updated at: 21 March 2017
Application Deadline: 10 February 2017
Proficient in Computer Literacy especially in excel, communication skill, good working attitude
KAMP Accounting & Corporate Services သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းများအား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးနေသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး စာရင်းအင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာကို စိတ်ဝင်စားသူ၊ အရည်အချင်းရှိသူများနှင့် လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု ဖော်ပြပါ Accountant ရာထူးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင် ရမည်ဖြစ်သည်။ - လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းများအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ စာရင်းစစ်ခြင်း - မိမိဌာနမှ တာဝန်ခွဲဝေပေးသော စာရင်းလုပ်ငန်းပိုင်းများကို ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း - လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း (Filing, Documentation, Processing the transactions) - မိမိဌာနမှ စီနီယာများနှင့် တွဲ၍ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် စာရင်း၏ အခြေခံ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရခြင်း - မိမိတာဝန်ယူရသော လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်တာဝန်များအား စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရခြင်း
အထက်ဖော်ပြပါ လစ်လပ်နေရာ Accountant အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ - စာရင်းအင်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်များကို လေ့လာဆဲ၊ လေ့လာပြီးသူများ - B.Com, B. Act, B.B.A, LCCI Level II, III, CAT, ACCA, CPA - Microsoft Word နှင့် Excel အခြေခံ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်ရမည်။ - Accounting Software တစ်ခုခု အသုံးပြုတတ်သူကို ဦးစားပေးမည်။ - လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ - လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နုိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်အရ နယ်ခရီး သွားလာနိုင်ရမည်။
We, KAMP performs the service provider to local and international business organisations as financial and accounting services. Besides, we unite as team based working structure with enthusiasm for effective supporting performance to our clients in terms of timely reporting for decision making process.